Shiine Nooca Jarmalka ah ee Soosaara Xero-warshadeedka iyo Warshadaha | Glorex
Giraanta aan qallafsanayn ee nooca hose clam ee Jarmalka waxay xaqiijineysaa in tuubada jilicsan ee silikoon aan la jajabin ama la jarin inta lagu gudajiro iyo adeegsiga ugu dambeysa ee torque, iyadoo la ilaalinayo daacadnimada isku xirnaanta lana siinayo shaabad xasilloon, oo waafaqsan DIN3017.
Baakadaha caadiga ahi waa baco bac ah, sanduuqa dibediisuna waa kartoon. Halkaa waxaa ku taal sumadda sanduuqa.Suuqa baakadaha khaaska ah (khaanadda cad, sanduuqa midabka, sanduuqa midabka, sanduuqa caagga, sanduuqa qalabka, khariiradda, iwm.)
Noocyada dhuumaaleysi ee Jarmalka ayaa si weyn loogu isticmaalaa: baabuurta, warshadaha iyo warshadaha badda.
Xawaaraha nooca jarmalka ee jarmalka ah waa adag yahay oo waara. Barkimaha dhinacyadu waxay leeyihiin saameyn ilaalin ah tuubbada. Naqshadeynta convex iyo concave ee gudaha waxay leeyihiin natiijo hagaajin ka wanaagsan tuubbada ， kuwaasoo ka celin kara tuubadu inay ka dhacdo ama dib u dhicin.
kumbuyuutar / boorso
Hore: Laba laab tuubada xargaha siligga
Xiga: Nooca dhuumaaleysi ee Jarmalka ayaa gacanta ku haya
Nooca jarmalka ah ee jarmalku bilaa xadhkaha (iyada oo s ...